भारतीय ज्वाइँ खोज्ने क्रम बढ्यो « Kakharaa
भारतीय ज्वाइँ खोज्ने क्रम बढ्यो
७ भदौ, काठमाडौं । –२५ माघ २०७५ मा नेपालगन्ज फुल्टेक्राका लक्ष्मी कुम्हारले १६ वर्षीया छोरी सपनाको बिहे तय गरे । निम्तो कार्ड छपाएर १०० वटा त बाँडे । बिहे आउन सात दिन बाँकी थियो । बालविवाहको हल्ला चल्यो । प्रहरीले बिहे रोक्यो । सीमावर्ती भारतीय गाउँ गंगापुरमा सुटुक्कै साइकलमा छोरी लगेर बिहे गरिदिए र भोलिपल्ट छोरीसँगै घर फर्के । उनले भने, ‘लगनकै दिन बिहे गर्न पाएर म धन्य भएँ । बूढीले छोरीज्वाइँलाई आशीर्वाद दिन नपाएको गुनासो गर्छे । गौनापछि छोरी आफ्नो घर जान्छे ।’
अधिवक्ता विश्वजित तिवारीका अनुसार २० वर्ष नपुगेर भएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ । कसुर प्रमाणित भए बिहे गर्ने र गराउनेलार्ई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ । तिवारी भन्छन्, ‘विपन्न मधेसी समुदायले कानुन छल्न भारतीय ज्वाइँ खोजेर उतै लगेर बिहे गर्ने जुक्ति निकालेका हुन् ।’
जिल्लामा वर्षमा कति बालविवाह हुन्छन् भन्ने तथ्यांक छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्लामा चार वर्ष अवधिमा ९ वटा मुद्दा मात्र दायर गरेको छ । तर बालविवाह धेरै भइरहेको ‘गुपचुप’ कार्यले दर्शाउँछ ।
बाल क्लब सञ्जालको पहलमा गत आवमा ३५ वटा बालविवाह रोकेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर ओली बताउँछन् । सबैभन्दा बढी १० वटा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकै थिए । जिप्रका बाँकेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी श्यामकुमारी पाइजा मगर रोकिएकामध्ये १५ वटा भारतमा बिहे गर्ने तयारी रहेको बताउँछिन् ।
नेपालगन्ज–१ मा रहेको सेवा केन्द्र कार्यालय नजिकैबाट गत वैशाखमा प्रहरीले काँदु थरकी १८ वर्षीया युवतीको बिहे रोक्यो । घरमा भोज चलिरहेको थियो । जन्ती आउन बाँकी रहेकै बेला दुलहीलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाएर पठाइयो । एक महिनापछि उनको भारत लगेर बिहे गरियो । मगर भन्छिन्, ‘गुपचुपमा भारतमा बिहे हुन्छ । समस्या परेर हामीकहाँ आउँदा हामी भारतमै अंशबन्डा र बच्चाको अधिकारका लागि लड्न सुझाव दिन्छौं ।’
दुई वर्षअघि बाँके प्रहरीले नरैनापुर गाउँपालिकाको मटेहियामा बालविवाहविरुद्ध अप्रेसन चलाएर ११ वटा बिहे रोकेको थियो । अहिले प्रहरी सक्रियता देखिँदैन । जिल्लामा हुने बालविवाहमध्ये कम्तीमा पनि एक तिहाइ भारतीयसँग हुने गरेको सम्बद्ध बताउँछन् ।
जिल्ला बाल क्लब सञ्जालकी अध्यक्ष मेनुका रावत बाल क्लबको पहलमा रोकेकामध्ये कम्तीमा पनि २५ देखि ३० प्रतिशतको बिहे भारतीय नागरिकसँग गुपचुपमा हुने गरेको अनुभव सुनाउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नेपालगन्ज २२ पुरैनीमा एक १४ वर्षका एक युवकको बिहे हुँदै थियो । बराती जान तयारी हुँदै थियो । खबर टोलमा सनसनी फैलियो । प्रहरी आयो । सम्झायो–बुझायो । फर्केर गएसँगै ती युवकले भारतमा गएर बिहे गरे । दुलही नल्याएरै फर्के ।’
जानकी–५ कैलासीका रामदेव मि श्र विपन्नता र रूढिवादी सोचका कारण मधेसी समुदायले कानुन छल्न भारतमा बिहे गरिरहेको बताउँछन् । ‘१६ वर्षमा छोराछोरीको बिहे गरे पनि तीन वर्षपछि गौना र त्यसको एक वर्षपछि थौना हुने भएकाले नेपालको कानुनले भनेझैं २० वर्षमा बिहे भइरहेको छ’, उनले भने, ‘विपन्न मधेसी समुदायले २० वर्षसम्म सन्तानलाई बिहे नगरी राख्नै सक्दैनन् । उनीहरू कानुन छल्न बाध्य छन् ।’
विपन्न समुदायमा ‘छोरीलाई जति पढायो, उति धेरै दाइजो बढायो’ भन्ने सोचाइ व्याप्त छ । मधेसी समुदायमा गौना प्रथा पनि बालविवाहको कारक हो । यो प्रथामा रजस्वला हुनुअघि छोरीको बिहे हुन्छ । बिहेपछि बालिका माइतमै सिन्दूर लगाएर बस्छे । कम्तीमा तीनदेखि सात वर्षपछि गौना (दुलही घर फर्काउने काम) हुन्छ । गौना भएपछि दुलही जान्छिन् र केही दिन बसेर माइत फर्कन्छिन् । त्यसको एकडेढ वर्षपछि थौना हुन्छ अर्थात् दुलहादुलही लिन आउँछन् । त्यसपछि मात्रै केटी नियमित रूपमा केटाको घरमा बस्न थाल्छिन् ।
सिबिन नेपालगन्जका संयोजक सिद्धराज पनेरू भन्छन्, ‘थाहा भएपछि बिहे रोक्ने प्रयास हुन्छ । सम्झाइबुझाई गरेर फर्केको केही समयपछि भारतमा पुगेर बिहे गरिसकेका हुन्छन् । कसले रोक्ने ? कसरी रोक्ने ? आजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा समाचार छ ।
डिशहोम र प्रभु टिभी मर्ज हुँदै
काठमाडौं । डिशहोम र प्रभु टिभी एक आपसनमा गाभिने भएका छन् । डाइरेक्ट टु दी